Amaphupho ngokupheka nokudla nokuphuza – iAfrika
Amaphupho ngokupheka nokudla nokuphuza
Amaphupho ngokupheka, ukudla nokuphuza
Asho ukuthini amaphupho ngokupheka, ukudla nokuphuza? Lokhu kuhlanganisa ukuthenga ukudla, ukudla, ukudla kakhulu, utshwala, ikhofi, ubisi, itiye namanzi.
Tags Ukudla, Ukupheka, Ukuphuza
Amaphupho ngendlu yokudlela
Ukuphupha usendlini yokudlela udla, lokho kuyibika lokuthi esikhathini esingengakanani kukhona abantu ozohlangana nabo, kuthi isiphetho sokuhlangana nabo nokubazi kube ukuphembeka kobungani. Leli phupho liyafana nokuphupha imvilophu ngokwencazelo yalo. Kanti uma uzophupha usendlini yokudlela kodwa ube ungadli lutho, lokho kungase kube yibika lokudlula emhlabeni kwesihlobo sakho.
Tags Izihlobo, Izindlu, Izindlu zokudlela
Ukuphupha udla kungasho into enhle kanye nengeyinhle ngempilo yakho. Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi uzothola injabulo nempumelelo empilweni. Uma udla ulele phansi kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela. Uma ungowesifazane ongashadile kusho ukuthi kuzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamelweni lokudla kusho ukuthi uzokwenza umngani omusha maduzane. Uma uphupha ukuthi udla kangangokuthi uzizwa ungaphilile kusho ukuthi … Read more
Uma uphupha ukuthi usebenzisa imbiliso kusho ukuthi kunemali ongayilindele ezayo maduzane.
Uma uphupha ukuthi ubona ukolo kusho ukuthi ibhizinisi lakho lizothuthuka futhi uzothola zonke izinto ozithandayo.
Uma uphupha usebenzisa ushukela kusho ukuthi awuzukuba nemali eyanele yazo zonke izinto ozidingayo.
Uma uphupha ukuthi udla isobho kusho izinto ezinhle ngekusasa lakho. Amaphupho ngokudla.
Uma uphupha ukuthi usebenzisa usawoti kuwuphawu oluhle futhi kusho ukuthi uzophepha abanye behlupheka.
Uma uphupha ukuthi udla irayisi kuwuphawu olubi futhi kusho ukuthi uzoba nezinkinga maduzane. Amaphupho ngokudla.
Uma uphupha ukuthu udla amakinati kuwuphawu lokuba nempilo nentuthuko uma emnandi kodwa uphawu lwesikathi esinzima uma ebolile noma ekhakhile.
Uma uphupha ukuthi uphuza amasi kuwuphawu olubi uma ebolile futhi kungenzeka uxabane nophathina wakho. Amaphupho ngokudla.
Tags Amasi, Ukudla
Uma uphupha ukuthi udla ujeli kufanele uqaphele ngoba kungaba nengozi empilweni yakho ikakhulukazi eyomlilo.
Uma uphupha ukuthi udla ujamu kuwuphawu olubi ngaphandle uma uzenzele lowo jamu. Uma kunjalo kusho impumelelo nentuthuko.
Uma uphupha ukuthi udla uju kusho ukuthi uzobusiswa ngenhlanhla nentuthuko.
Uma uphupha upheka ngofulawa kusho ukuthi izikhathi ezinzima zingehlela umndeni wakho maduzane.
Uma uphupha ukuthi udla amaqanda kusho ukuthi uzoba nempumelelo emsebenzini noma esikoleni. Kodwa uma amaqanda ebolile kusho ukuthi kuzoba nenkathazo empilweni yakho. Leli iphupho incazelo yalo engahlukaneseka kabili,okuya ngesimo sawo amaqanda osuke uwaphuphile, kodwa isisekelo salo sikwimpumelelo. Ukuphupha amaqanda afile – Kusho ukungaphumeleli kulokho okwenzayo noma obuhlose ukuqala ukukwenza, kungaba ngokwemfundo, umsebnzi, ibhizinisi, uthando njalo … Read more
Uma uphupha ukuthi udla ushizi kusho ukuthi ukushesha kwakho uthukuthele kanye nokungakwazi ukulinda kuzokufaka enkingeni.
Uma uphupha ukuthi udla ikhekhe kusho ukuthi uzoba nenjabulo empilweni yakho.
Uma uphupha ukuthi udla isinkwa kusho ukuthi kuzokwenzeka izinto ezinhle kuwe futhi uzophumelela empilweni. Kodwa uma udla isinkwa esinezinhlamvu eziningi nokolo oluningi phakathi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi ubhekane nesikhathi esinzima emsebenzini.